विचित्र संसार Archives - नागरिक रैबार
न्युजिल्याण्डबाट उडेको रकेटको टुक्रा चन्द्रपुरमा खस्यो !
काठमाडौं । गत शनिवार अर्थात् अप्रिल २ को बेलुकी भारतको महाराष्ट्रस्थित चन्द्रपुरको आकाशबाट आगोको डल्लाहरु भुइँमा गिरे । सुरुमा मानिसहरुले यो कुनै उल्कापिण्ड भएको आशंका गरे । तर जब भोलिपल्ट बिहान गाउँलेहरुले आगोको डल्ला खसेको ठाउँमा केही अज्ञात उपकरण तथा टुक्राहरु फेला पारे तबमात्र थाहा भयो कि त्यो उल्कापिण्ड नभई कुनै रकेटको टुक्रा हो । […]
बाँदरबाट बाली जोगाउन ‘भालु’लाई जागिर (भिडियो सहित)
बाँदरलगायतका जंगली जनावरले खेतबारीको बालीनाली खाएर धेरै किसानहरू समस्यामा पर्दछन् हाम्रो देशमा पनि । बाँदरबाट बालीलाई जोगाउनका लागि अनेक उपाय अपनाइन्छ । कतिपय यस्ता उपायहरू प्रभावकारी पनि हुन्छन् । भारतको तेलंगानाका किसानले आफ्नो खेतबारीमा लगाएको बालीनालीको सुरक्षाका लागि ‘भालु’लाई खटाएका छन् । वास्तवमा किसानहरूले खेतबारीको बाली बाँदरलगायका जन्तुबाट जोगाउनका लागि एकजना मानिसलाई ड्युटीमा खटाएका छन् […]
खुल्यो युरोप र एसियालाई जोड्ने विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा लामो झोलुंगे पुल सञ्चालनमा आएको छ । युरोप र एसियालाई जोड्ने उक्त झोलुंगे पुलको निर्माण टर्की र दक्षिण कोरियाली कम्पनीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । यो झोलुंगे पुलले टर्कीको राजधानी स्तानबुलको बाहिर युरोप र एसियालाई मात्र ६ मिनेटमा जोड्दछ । यो पुल निर्माणमा ५ वर्ष लागेको थियो र यसको लागत ३ […]
२१ दिनभित्र १५ युवकसँग डेटिङ गर्ने युवती, यस्तो रह्यो अनुभव
कुनै युवक युवतीले तीन हप्तामै १५ जना डेटिङ पार्टनर परिवर्तन गर्छन् भन्ने सुन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । तर एकजना युवतीले यस्तै पत्याउनै नसकिने काम गरिदिएकी छिन् । ती युवतीले यस विषयमा आफैंले आफ्नो किताबमा खुलासा गरेकी हुन् । उनले करिब दिनदिनै पार्टनर फेर्दाको आफ्नो अनुभव पनि सोसल मिडियामा शेयर गरेकी छिन् । २१ दिनमा १५ […]
२२ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा बिक्यो संसारकै महंगो ऊँट !
काठमाडौं । इस्लाम धर्माबलम्बीहरुका पवित्र महिना रमजान सुरु हुँदैछ । रमजानभन्दा अगाडि साउदी अरबमा एउटा ऊँट अहिलेसम्मकै महंगो मूल्यमा बिक्रि भएर संसारकै महंगो ऊँटको रुपमा विश्व किर्तिमान कायम गरेको छ । उक्त ऊँटको मूल्य ७० लाख साउदी रियाल अर्थात् करीब २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ परेको छ । गल्फ न्यूजको एक रिपोर्ट अनुसार उक्त उँटका […]
चिठ्ठा परेको लोभमा परेपछि…
काठमाडौं । चिठ्ठा परेको लोभमा फस्दा एक व्यक्तिको २९ लाख रकम गुमेको छ । ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ता जोन लरेन्स नामका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको माध्यामबाट पीडितलाई ९० लाखको चिठ्ठा परेको छ, सुनको सिक्री र दुई लाख पाउण्ड भएको सुटकेस पार्सल पठाएको भन्ने सूचनाका आधारमा लोभिंदा यसरी २९ लाख गुमाउनुपरेको हो । उक्त सूचनाको प्रमाण खोज्नेतिर नलागी अरुले […]
मृत्युभन्दा ठ्याक्कै अगाडि मानिसले के सोच्छ ? वैज्ञानिकले यस्तो रेकर्ड गरे
मानिसको दिमागमा यस्ता कैयन् सोचाइहरू आउँछन् जसको जवाफ ऊसँग हुँदैन । यद्यपि जब वैज्ञानिकहरू यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने कोसिस गर्दछन् तब केही रहस्यका पर्दाहरू अवस्य खुल्दछन् । मृत्युको केही मिनेट पहिले मानिसको दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ र के कुरा सोचिरहेको हुन्छ होला ?वैज्ञानिकहरूका अनुसार मर्न थालेको मानिसको दिमागमा अन्तिमम समयमा आफ्नो जिवनका उत्कृष्ट पलहरूको याद […]
खेलौना जहाजसँग युवतीको प्रेम, खेलौनालाई प्रेमी बनाएर रोमान्स
कतिपय मानिसका आनीबानी तथा सौख नै अचम्मित पार्ने खालका हुन्छन् । हंगेरीकी एक युवती बच्चाबच्चीले खेलाउने एउटा खेलौना जहाजसँग गहिरो प्रेममा परेकी छिन् । राजधानी बुढापेस्टमा बस्ने २८ वर्षकी सेन्ड्रा नामकी ती युवतीले खेलौना जहाजलाई नै आफ्नो ब्वायफ्रेण्ड बनाएकी छिन् र सोही खेलौनासँग रोमान्स गर्न थालेकी छिन् । बेलायती पत्रिका द मिररका अनुसार ती युवतीलाई […]
कागजमा १८८ बच्चा जन्माएर सरकारसँग करोडौं ठगी
आजकल धेरै मानिसहरू सजिलै पैसा कमाउने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । यसका लागि केही मानिसले ठगीका नयाँ-नयाँ तरिकाहरू अपनाउँछन् । बेलायतमा बस्ने ४० वर्षका एक व्यक्तिले धोकाको एक नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनले एउटा यस्तो अनौठो कथा तयार गरे कि सरकारसँग ३० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै ठगी गरे । जब ती व्यक्तिको पोल खुल्न […]
कुइनो ठोक्किंदा करेन्ट लागेझैं किन हुन्छ ?
आफ्नो कुइनो कुनै वस्तुमा ठोक्किंदा करेन्ट जस्तै झट्काको महसुस तपाईंले पनि धेरैपटक गर्नुभएकै होला । तर आखिर यस्तो किन हुन्छ ? भन्ने बारेमा चाहिं सायदै सोच्नुभएको होला । कुइनो जोडसँग ठोक्किंदा कहिलेकाहीँ करेन्टको ठूलै झट्का लागेझैं अनुभव हुन्छ भने कहिलेकाही काउकुति जस्तो पनि लाग्दछ । वास्तवमा यस्तो करेन्ट कुइनोको हड्डीमा पैदा हुन्छ । विज्ञका अनुसार […]
जब युवक बोरामा सिक्का भरेर स्कुटी किन्न गए (भिडियोसहित)
सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल बनिरहेको छ । भिडियोमा एकजना युवक स्कुटर किन्नका लागि बोरामा सिक्का भरेर शोरुम जान्छन् । उनको त्यो शैली देखेर सबै अचम्ममा पर्दछन् । बोरामा एक दुई तथा १० रुपैयाँका सिक्का थिए । ती युवकले स्कुटी किन्नका लागि महिनौंदेखि पैसा बचत गरिरहेका थिए । उनीसँग त्यतिधेरै सिक्का जम्मा हुनुको कारण चाहिं […]
मंगल ग्रहमा शुक्रकिट आकारको ढुंगा !
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले जीवनको खोजी गरिरहेको सौर्यमण्डलको एक ग्रह मंगलमा शुक्रकिट आकारको ढुंगा फेला परेको छ । उक्त अनौठो पत्थर फेला परेसँगै वैज्ञानिकहरु चाहिं खुसी छन् । अमेरिकी अन्तरीक्ष संस्था नासाको मार्स क्युरोसिटी रोभरले उक्त ढुंगाको तस्वीर खिचेको हो । झ्वाट्ट हेर्दा यो ढुंगा शुुक्रकिट तथा चेपागाडा आकारको जस्तो देखिन्छ । नासाको रोभरले पत्ता लगाएको […]
मृतक छोराको शुक्रकिट माग गर्दै अदालतमा निवेदन !
काठमाडौं । भारतको दिल्ली उच्च अदालतमा एक दम्पत्तिले अनौठो खालको निवेदन दर्ता गराएका छन् । उक्त निवेदनमा सो दम्पत्तिले आफ्नो मृतक छोराको शुक्रकिट आफुहरुलाई दिन माग गरेका छन् । निवेदनमा उनीहरुले मृतक छोराको शुक्रकिट बाबुआमालाई प्रदान गर्नका लागि गंगाराम अस्पतालको नाममा आदेश दिन माग गरेका छन् तर गंगाराम अस्पतालले अदालतमा पेश गरेको प्रत्युत्तर निवेदनमा चाहीँ […]
विचित्र संसार मरेपछि आफन्तकै लास खाने परम्परा !
विचित्र संसार कलियुगका राम ! पत्नीको अग्नि परीक्षा लिन हत्केलामा कपूर जलाए !
विचित्र संसार कहिले भयो ऐनाको आविष्कार ? को हुन् ऐना हेर्ने पहिलो व्यक्ति ?